Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp iye zvino aishandiswawo kudai zvinyorwa zvemakambani kune gweta? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 5 June 2019	• 6 Comments
Nhasi pane imwe shanho itsva pamusoro peJos Brech munyaya yeNicky Verstappen (ona Telegraph). Jos Brech, uyo zvino anonzi Jos B. munhau uye haasati aratidzwa nemifananidzo asi nemifananidzo. Nyaya yacho inotanga nemashoko kuti mutungamiri wenyaya dzezvematongerwo enyika munyaya ino akafira mudambudziko rakakomba. Iwe zvino unobva watanga kushamisika kana murume wacho ainetseka nehana yake paakaona kuti aishanda pane PsyOp (kushanda kwepfungwa), aida kutaura uye saka aifanira kucheneswa? Hatizombokwanisi kuratidza izvozvo. Tidy yakanaka.
Zvaunogona kuratidza ndezvokuti zvose zvinotarisirwa munyaya yacho zvinoshandiswa pane zvenhema muhurukuro pamusoro peDNA yakawanikwa. Izvozvo zviri pakarepo pamusoro penzira yeBaesiesi yekuverenga mikana panzvimbo yekuti nyaya yemutemo yakanyatsojeka yokuti DNA yaJos Brech, yakawanikwa mukushayikwa kwake, yakashandiswa mu "mhosva yeuponda" iyo yakanga isiri mhaka yekuponda, nokuti kuuraya kwakanga kusina kumbobvumira. Iwe hauchiri kubvumirwa nemutemo kuti ushandise DNA yemhosva A pane imwe nyaya B. Ichokwadi kuti Gerald Roethof haaiti zvakare kuzvidzivirira kune izvi chimwe chiratidzo chinoratidza kuti tiri kutarisana neChePo mhosva pano. Izvi zvinogona kukurumidza kubvisa kuchengetwa kwaJos B.
Nhaurirano yacho inodzokororwazve kumhirizhonga dzepabonde kana kwete:
Gweta Gerald Roethof anotsanangura mushumo wechiremba wezvepurisa Rob Bilo uye anotaura kuti kukuvadza kwaNicky's anus hakureve kuti mukomana akabatwa zvepabonde: "Izvozvi zvingave zvakare zvakakonzerwa nezvigaro zvakasimba kana kuti kupukuta zvakaoma."
Zvakanyatsoenderana, kuongororwa kwepfungwa kunoratidza zvakare kuti Jobho B. ndiye anonyatsofambira mberi, uye izvo zvinowanzoita chikamu chinowedzera mupfungwa dzevanhu vanopfurikidza nepfungwa yokuti Jos B. anofanira kuva mutambudzi, kuitira kuti parege kubvunza kana tinogona kunge tichishanda nekushanda kwepfungwa (PsyOp) kutanga mitemo mitsva.
Purezidhendi iye zvino anoteerera Roethof ekugumisa kuti maPBC nyanzvi anofunga kuti Jos B. "munhu chaiyewo". "Vanoonawo chirwere, chinonzi pedophilia." #Nicky
Zviri pachena kuti kwakanga kusina uchapupu hwehupombwe kana kushungurudzwa kwepabonde, saka DNA ye (PsyOp actor?) Jos B., yakagadziriswa mu (yakaita?) Isingaiti, saka haifaniri kunge yakashandiswa mune (isinapo) mhosva yerufu Nicky Verstappen. Zvisinei, nokutamba zvakare pamanzwiro evanhu vachitarisa, kucherechedza kunokanganiswa kubva pamutemo uyu usina kururama. Kutaura zvazviri, dare iri kutora matanho emitemo mitsva (kuburikidza nekubvumidza kushandisa DNA) pamutemo mutsva. Ichokwadi chekuti Gerald Roethof haatauri pamusoro peizvi zvinomuita gweta (PsyOp) risingatendi.
Asi kufanana nezvinhu zvakawanda, PsyOp matambudziko anoshandiswa kwezvinangwa zvakawanda. Muchiitiko ichi, Jos Brech aizoitawo chirevo kune gweta rake. Ichocho ndechekuti nharaunda yose yePeypep, nokuti ndeyechokwadi pamusoro pekugadzirisa mitemo yakawanda sezvinobvira, saka izvo zvinodiwa zvinoitwa nenzira iyo iwe unoda kuchinja mutemo.
Munyaya yeT Thijs H. Takaona kare kuti chiremba-nyanzvi chekuchengetedzwa kwemasangano eGGZ aifanira kuregedzerwa kwechinguva, nokuti zvimwe zvifananidzo zvemamera uye zvinyorwa zvevashandi hazvigone kushandiswa. MuJose B. nyaya ivo vanoda chirevo kubva kuna Jos B. ku (avo) PsyOp) gweta Gerald Roethof. Uye saka dzimwe kodzero dzevanyori dziri kubviswa zvishoma nezvishoma (ona pano). Zvisinei, nokuti zvinoitika kuburikidza nematambudziko makuru ekuuraya, unyengeri kune vhidhiyo, vanhu vanozvifarira. Hapana anoona kuti kushandurwa kwemuitiro kune mutemo kunogona kukanganisa vagari vemunyika yose, saka hapana anowanikwa munzira. Vakadzi uye vashandi mumapfekheni vanodzidziswa kuchengetedza miromo yavo, nokuti vakapika kukuteerera korona uye kana korona ichitaura mutemo mutsva kuburikidza neSpyOp's, ivo vachashandira pamwe kana kuramba vakanyarara.
Tags: B., Brech, mutungamiri, zvakanyanya, Featured, forensic, Gerald, HOF, Jos, Kururamisira, Nicky, ngozi, vakafa, OvJ, dare, mhosva, mhosva, Roethof, Verstappen
Heray akanyora kuti:
Apo Jos B akanga achangobva kusungwa, Gerald Roethof akambotaura kuti DNA yakanga yawanikwa pasina mvumo, asi iye akaramba akanyarara. Zvichida zvakadzokorora zvakare, nokuti pane imwe nyanzvi gweta raizongomira pane izvi.
Akangodaro akarayirwa kuti aite sezvaaida kana zvaive chinhu chaicho. Izvi zvinoitwa kuitira kuti nyaya yacho ione seicho chaiyo.
Nokuti nyaya iyi haisi yakanaka, ndine chokwadi cheizvi. Tora chokwadi chokuti iyo chaiyo yevamwe vanoita zvakaipa haitauri, asi bhuku rokuti 'Kufa kunoshamisa kwaNicky Verstappen' kunoratidza kuti mutungamiri wemusasa Joos Barten aiziva kuti muviri waNicky waizowanikwa kupi. Uye kune zvimwe zvakawanda zvinoratidza mune izvi zvingave zvingave zvaibatanidzwa semubatsiri munyaya iyi.
Ndinofunga kuti chinangwa chacho chaiva chokuti Jos B apiwe mhosva, kuitira kuti rugare rweHeibloem rwudzoke. Asi kana uchitarisisa, unoona kuti wakaoma zvikuru. Nemhaka yekuti nyaya inonzwisisika ingave yakagadzirwa naJ Jos B semuipi wekupandukira? Kusanganisira zvinhu zvose zvinonyatsozivikanwa, zvakadai sekuti aizodzidzira mabhasikoro paheath mushure mekunge Nicky awanikwa.
Ndinofungidzira kuti haana kutenderera zvachose pano. Izvi zvakagadzirwa kuitira kuti aifanira kupa DNA yake gore rapera. Kudai akanga asina mabhasikoro ikoko, angadai asina kuuya mumufananidzo. Mapurisa emapurisa akafira muIraq uye achinzi akamusunga haachazokwanise kubvisa chirevo ichi.
Chinhu chinonyanya kunzwisisika chingave kana Jos achiramba B uye achiti haana kuziva kuti DNA yake yakawana sei mbatya. Zvadaro haagoni kutongerwa, nokuti hapana humwe hunopupu hwakakwana. Asi tinoona kuti ari kutambanudza nyaya yacho. Vangave vachishanda panhau inogadzirisa mushure mezviitiko uye izvi zvisati zvapera - uye ndinoda kuziva kana zvichange zvamboitika. Uye hongu, ini handisi kusanganisa kuvepo kwekuti mutungamiri wenhau yepamutemo iye zvino akaurayiwa. Hupenyu hwevanhu hunosuruvarisa.
Pane imwe nguva kunze kwenyaya yako yose, ndinoda kuona Roethof akambotaura izvozvo. Handikwanise kuyeuka kana kuwana dhauriro apo ndakamunzwa achitaura izvozvo. Chinhu chisina kujeka chokuti haachimanikidze pane izvi zvinoratidzika kumuita mutongi we psyop.
Ndinoyeuka mubvunzurudzo pfupi mumugwagwa mushure mokunge Jos akasungwa. Handisati ndaziva kuti izvi zvakange zvakadini uye hazvichazove zviri paIndaneti. Asi ndinorangarira izvi nokuti ndakanga ndave ndatozvibvunza kana Jos's DNA yakanga isati yawanikwa zvisina kukodzera. Apo gweta rake raitaura kudaro, ndanga ndichiziva kuti zvaizoita sei nehurukuro iyi. Zvakanaka tinoziva kuti ikozvino, havana kumbozvinzwazve.
Hafu yeyanyanzvi inoshanda zvakananga / zvisina kufanira kuhurumende. Humwe hafu haiti kuita izvi uye anotya Dhiani, uyo anoramba akatarira mareji emhosva nokuda kwe "state", uye anotarisa kumusoro kweboka rokutanga. Kutya kwekudzingwa nemagweta eboka rokutanga. Ndicho chikonzero ivo vasingaiti zvakanakisisa zvavo.
Masayendisiti eboka rokutanga ane ushamwari hwepedyo uye hwepedyo nevatongi neBar Association. Nzvimbo yakakwirira yekubudirira kana iwe ukawana gweta rakadaro. Iwe haufaniri kunge uine kukakavadzana kwepamutemo maererano nehuwandu hwemamiriro evanhu kubva pane script. Zvadaro havangatori nyaya yacho kana kuparadza nyaya yako.
Newspaper Trouw yakabudisawo nyaya inoti 'DNA match ndiyo chitsauko chimwe chete chemufurisi' yekupedzisira 28 August. Muchiri, Ton Broeders, purofesa wezvemhosva muLeiden University, anoti: "Zvinoshamisa kuti DNA yemunhu uyu akafungidzirwa yakawanikwa nokuti yakanga isipo. Izvo zvinofanira kunge zviri mbiri dzakasiyana zvakasiyana-siyana: vanofungidzirwa uye vanoshaya. "Maererano nePublic Prosecution Service yakaenda maererano nemitemo, asi gweta raB B. rinogona kupesana nekuregererwa kweuchapupu.
Saka zvinoshamisa kuti Roethof haashandisi izvi mukuzvidzivirira. Nenzira, ino nyaya inoita seyakanyangarika kubva kune Trouw web archive, asi ini ndichiri kuigamuchira kuburikidza http://www.topics.nl.
Saka Jos akabata zvinyorwa zvakanyorwa se "nhumbi", saPaw akanzwa zuro. Haadi kuzarura chirevo chake asi, nokuti zvinhu zvose zviri kushandiswa kupikisana naye, anodaro. Chikonzero nei achifunga kuti chirevo ichi chichava pfuma gare gare pane kamwe pakarepo iri kupfuura ini.
Kuwa uku ndakave nehurukuro nemumwe munhu mumasangano ehupfumi uyo akati Jos akanga ari kunyorera pasi pevana vepamberi uye kuti Nicky akanga aripo zvakare. Iyi ndiyo nzira yaJos's DNA yakaguma pamusoro pevasikana vaNicky. Munhu iyeye akataurawo kuti akanga anzwa izvi kubva kune vhidhiyo. Pamwe kukanganisa, nokuti handina kuwana chinhu pamusoro peizvi. Zuva rakatevera uyu munhu akabvisa mhinduro yake. Jos angangodaro anouya nemashoko akadaro gare gare.
« Anja Schaap asati atsigirwa a PsyOp? Ona pano nei (video)
Kunyatsotsvaka kutsvaga kwehupenyu hwePBS mushandi kubva kuDen Kolder »
Total Visits: 14.493.274